Waddada lagu gaarayo – in Swiidhan guri lagu iibiyo iyo in laga iibsado - Fastighetsbyrån
Waddada lagu gaarayo – in Swiidhan guri lagu iibiyo iyo in laga iibsado
In guri la iibsado ama la iibiyo badanaa waa waxa nolosha ugu weyn ee la sameeyo, in la fahmo dhammaan sida ay wax u dhacayaanna waxay noqon kartaa arrin adag. Halkan waxaannu dooneynaa in aannu kuu fududeyno sidii aad si sax ah ugu dhex dhaqdhaqaaqi lahayd suuqa guryaha ee swiidhishka iyo in aannu kuu abuurno duruufo aamin ah oo guri iibsasho.
Waxaannu xitaa fursad u heysannaa in aannu kugu soo xirno turjumaan gacan kaa siin kara waqtiyada muhiimka ah ee iibsashada guriga. Fadlan la xiriir mid ka mid ah xafiisyadeenna.
Cinwaannada hoos ku qoran hoostooda ayaannu ku bixineynaa sawir wax tilmaamaya oo ku aaddan suuqa guryaha Swiidhan, waxaannuna ku sharraxeynaa sida hannaanka guri iibsashadu u egyahay.
Qaababka degaanka ee Swiidhan
Swiidhan sida ugu muhiimsan waxaa jira seddax qaab-deegaan oo kala duduwan:
Hanti ma guurto ah – Waxaad deggantahay guri aad leedahay oo dhul aad leedahay ku yaalla. Haddii aad dooratid in aad iibsatid guri aad leedahay oo dhulkaaga ku yaalla markaas adiga ayaa guud ahaan go’aaminaya, mas’uulna ka ah wax kasta oo deegaankaaga taabanaya.
Shuqo aad deegaankeeda leedahay – Waxaad deggantahay shuqo, waxaadna leedahay xaqa degitaanka meeshaas. Adiga iyo dadka kale ee dhismada deggan ayaa dhismada isla leh oo si wadajir ah isula leh urur wadaag ah, waxa loogu yeero ururka guryaha bar-iibsashada.
Shuqo xaq-kireysasho– Waxaad deggantahay shuqo waana kuu kireysanyahay deegaanku. Waxaa xitaa jira guri la kireeyo laakiin waxaa caadi ahaan badan in shuqo la kireeyo, si billa ahna lacag go’an loo bixiyo.
Marka laga reebo qaab-deegaannada caadiga ah waxaa jira siyaabo kale oo loo dego. Waxaa tusaale ahaan jira shuqooyin milkiyad ah, nuuc uu qofku shuqadiisa leeyahay urur loo dhanyahay la’aantiis. Waxay u egtahay qaab-deegaameedka ka jira waddamo kale oo fara badan, laakiin waa wax aan Swiidhan caadi ka ahayn. Qaab kale waa heshiis dhul kireysasho taasoo ka dhigan in aad guriga leedihid laakiin dhulka uu ku taaganyahay aadan lahayn, ee aad ka kireysatay milkiile dhul.
Haddii aad dooratid in aad degganaatid shuqo milkiyad qeyb ahaaneed ah waxaad isla markaasna ka mid tahay urur guryo bar-iibsasho, adiga oo markaas si wadajir ah wax ula go’aaminaya kuwa kale ee xubnaha ururka ka ah. Waa derbiyadaada inta u dhexeysa oo keliya waxa aad go’aamineysid laakiin xitaa halkaas waxay noqon kartaa in ay tahay in uu ururku oggolaado dib u cusbooneysiinta ama dib u dhisidyada qaarkood.
Waxaa dhici karta in uu farqi weyn u dhexeeyo waxa xubin ahaan lagaa doonayo iyadoo ku xiran hadba tirada xubnaha iyo guryaha ee ururka ku jira. Marka si fudud loo yiraahdo waxaa la dhihi karaa mar kasta oo uu ururku yaraadaba waa marka ay tahay in adigu xubin ahaan aad isu xilqaantid si dheeraad ah. Xagga ururrada waaweyn la isagama baahna is-xilqaamid sidaas u weyn laakiin waxay taasi sidoo kale ka dhignaan kartaa fursad yaraan xagga saameynta ah. Taasi waa muhiim in aad ogaatid inta aadan go’aan ka gaarin meesha iyo sida aad dooneysid in aad meel u degtid.
Dhammaan dallaallada guryaha ee Swiidhan waxay leeyihiin waxbarasho jaamacadeed, waana khasab in ay ka diiwaan gashanaadaan hey’ad xukuumi ah oo kormeerta, Hey’adda kormeeridda dallaallada guryaha. Hawlaha dallaallada waxaa nidaamiya sharci gaar ah, Xeerka dallaallada guryaha, sidaas darteedna si Swiidhan guri looga iibsado looma baahna wax sharci yaqaanno ah ama abuukaatayaal. Waa dallaalka cidda ka mas’uulka ah in ay sameyso dukumiintiga loo baahanyahay, sharci ahaanna ku habboon, marka guryo la kala iibsanayo.
Swiidhan waa iibiyaha cidda adeegsaneysa oo lacag ka bixineysa dallaalka. Dallaalku badanaa wuxuu si kali ahaan ah u leeyahay xaqa iibinta guriga taasoo lagu nidaaminayo heshiis xaq kali u lahaansho. Macnaha waa wax aan gebigeedba caadi ahayn in hal guri uu lahaado dallaallo fara badan. Sida sharciga ku cad waxaa dallaalka khasab ku ah in uu dhawro danaha labada dhinac intaba, sidaas darteedna Swiidhan looma baahna dallaal wax iibsasho.
Dallaalka ayaa mas’uul ka ah in uu iib-geeyo deegaanka, isu geeyo iibsadaha iyo iibiyaha, uuna ka shaqeeyo in iibiyuhu uu sheego wax kasta oo uu iibsaduhu u baahanyahay in uu guriga ka ogaado. Micnaha waa mas’uuliyadda dallaalka in uu isu ururiyo dhammaan macluumaadka lagama maarmaanka ah iyo in uu hubiyo in iibsaduhu uu taas helo.
Diyaar-garow guri iibsashada ka hor
Swiidhan waxaa ka jira shardi ku aaddan inta ay khasab tahay in aad dib uga dhiibtid deynkaaga guriga, shardiga bixinta lacagta lafaha ah, iyo sharci ka dhigan in aadan deynsan karin in kabadan 85 boqolkiiba qiimaha guriga, saqafka deynka deegaanka. Hal talo waa in aad la hadashid bangiyo kala duduwan si aad macluumaad fiican uga heshid sharciyadaas iyo waxyaabaha aad kala door-dooran kartid marka aad qorsheyneysid in aad guri iibsatid. Hubi xitaa in aad hannaan socodka horraantiisa heshid ballanqaad deyn oo qoraal ah. Haddii aad dooneysid in aad lacag deynsatid si aad guri u iibsatid wuxuu dallaalku ku weydiin doonyaa arrinkaas marka uu baayactanku billaabanayo ama inta aadan heshiiska saxiixin.
Waxaa jira siyaabo kala duduwan oo deegaan loo raadsado, in la helo macluumaad ku aaddan guriga mustaqbalkana waqti ayey u baahan kartaa. Intarneedka waxaa ka buuxa bogag fara badan oo fududeyn kara, wax ku oolna ka dhigi kara hannaan socodka. Bogga ugu shacbiyadda badan bogagga intarneetka ee loogu tala galay guryo-raadisku waa Hemnet.se iyo Booli.se laakiin waxad xitaa si toos ah u geli kartaa bogagga intarneetka ee dallaallada. Bogaggaas waxaad ka heleysaa tirakoobyo fara badan oo xagga sicirka ah iyo isbarbar dhigyo aad isticmaali kartid. Talo wanaagsan waa in la booqdo aagag deegaan oo kala duduwan iyo in la tago guryo tusitaanno fara badan.
Qaabka guri tusidda ugu badan Swiidhan waa waxa loogu yeero tusitaan furan. Taasi waxay ka dhigantahay in dallaalku uu xayeesiintiisa ku sheegayo marka uu tusitaanku dhacayo iyo in dhammaan ka baaraan degayaasha guri iibsashada lagu soo dhaweynayo in ay taariikhda iyo saacadda la go’aamiyay soo booqdaan guriga. Inta badan waxaa sidoo kale jirta fursad ah in dallaalka lagula ballamo tusitaanno gooni-gooni ah.
Wax caadi sii noqonaya waa in ka baaraan-degayaasha gurya iibsashadu ay dalbadaan tusitaan hor dhac ah oo guriga ku aaddan, macnaha in ay codsadaan in ay yimaadaan oo ay guriga arkaan horbaba tusitaanka furan ka hor. Mararka qaarkood waxay taasi keeni kartaa in guriga xitaa la iibiyo inta uusan tusitaanka furanba dhicin. Ka baaraan-degayaasha guri iibsashadu waxay sida la ogyahayba fursad u leeyihiin in ay beec dul dhigaan guriga mar kasta oo ay tahayba, iibiyuhuna wuxuu xaq u leeyahay in uu doorto in uu aqbalo beeca la dul dhigay iyo in uu guriga iibiyo xitaa tusitaanka la xayeesiiyay ka hor. Haddii aad deegaan go’an aad u daneyneysid waxaa sidaas darteed caqli ah in aad taas dallaalka dhakhsi ugu wargelisid.
Baaritaan iyo koontaroolid
Marka la is tusayo waa muhiim in aad waqti isi siisid aad si fiican guriga ugu baartid. Iibsade ahaan waxaa sida la ogsoonyahay in mas’uuliyadi kaa saarantahay in aad guriga baartid, waxa loogu yeero waajibka wax iska baaridda. Waxay taasi ka dhigantahay in aadan marka heshiiska la saxiixo ka dib wixii laga yaabo ee cillad iyo dhaawacyo yar-yar ah, ee aad aragtay, aadan mas’uuliyaddeeda dusha ka saari karin iibiyaha. Wey adkaan kartaa in baaritaan aad looga taxaddiray la sameeyo marka lagu guda jiro tusitaanka furan, sidaas darteed waxaa caqli wanaagsan ahaan kara in la codsado tusitaan gooni ah. Markaas waxaad si deggan u fiir-fiirin kartaa, una baar-baari kartaa guriga inta aadan wax go’aansan.
Waxaa intaas dheer in ay caadi tahay in gacan laga helo qof wax koontaroola si guriga baaritaan loogu sameeyo. Qofka wax koontaroolo wuxuu baarayaa ku dhawaad wax walba laakiin waxaa jirta waxyaabo aan soo geleyn koontaroolidda caadiga ah. Qofka koontaroolaha ah wuxuu kuu sheegayaa qeybaha soo gelaya koontaroolidda iyo waxyaabaha ay khasab tahay in aad adiga naftirkaagu baarto.
Iibiyuhu wuxuu xitaa dooran karaa in uu guriga koontaroolo inta uusan suuqa ku xayeesiin. Guri iibsade ahaan wuxuu qofku helayaa borotakoolka koontaroolidda guriga. Waa si dhib yar oo raaxo leh laakiin xitaa mararka nuucaas ah waa muhiim in iibsade ahaan aad eegtid qeybaha aan soo geleynin borotakoolka.
Haddii aad iibsaneysid guri lahaansho qeyb ahaaneed ah markaas xitaa waa in aad si fiican wax uga ogaataa dhaqaalaha ururka. Badanaa dhaqaalaha waxaa lagu soo bandhigayaa xayeesiiska daabacan ee si la xiriirta tusidda laguu siinayo, haddii kale hubi in aad heshid xisaab xir sanadeedki ugu dambeeyay iyo xeer ururka. Haddii aadan ku fiicneyn akhrinta xisaab xir sanadeedka waxaa markaas fiican in aad caawimaad heshid. Haddii aad tusaale ahaan iibsashada guriga lacag u deynsaneysid bangiga ayaa markaas kaa caawin kara eegidda dhaqaalaha ururka.
Beec dul dhigid
Waxaa ilaa heer badanaa dhaca in beec la dul dhigo taasoo ay ka dhalaneyso in beeca xayeesiinta guriga ku qoran uu kor u kaco. Laakiin waxay sidoo kale noqon kartaa in uu beeca kama dambeysta ah uu ka hoos maro meesha beeca laga billaabay. Inta ugu badan ee dhammaan guryaha cusub ee markaas la dhisay waxaa loo dejiyaa beec aan isbeddel lahayn, markaasna waxaa wax loo eegayaa sida caadi ahaan loo soo kala horreeyay halkaas oo qofki ugu horreeya marka hore la siinayo fursadda iibsashada guriga.
Beec dul dhigiddu Swiidhan maaha wax qofka beeca dul dhigay xiraya. Haddii la carrabbaabo beec dul dhigiddu qofka ma xireyso inta ka horreysa marka iibsadaha iyo iibiyuhu ay saxiixaan heshiiska wax kala iibsashada. Iibiyuhu sidoo kale kuma khasbana in uu beec go’an ku iibiyo ee wuxuu dooran karyaa in uu iibinta la noqdo goor kasta oo ay noqotaba inta uu hannaan socodku socdo ilaa iyo inta heshiis laga saxiixo. Waxaa intaas dheer in iibiyuhu uu dooran karo in uu guriga ka iibiyo beec dul dhige aan ahayn qofka beeciisu ugu sarreeyo.
Dallaalka waxay mas’uuliyad ka saarantahay in uu iibiyaha u gudbiyo dhammaan beeca la soo jeediyo, ee yimaada inta aan heshiiska la saxiixin. Sida sharciga swiidhishka ku cad waa in dallaalku uu qoraal ka sameeyaa dhammaan baayactamayaasha iyo beeca ay soo jeediyeen. Qoraalka waa in iibiyaha iyo iibsaduhu ay helaan maalinta wax la guda gelayo ee uu dallaalku wixii uu qoray gudbinayo.
Heshiiska waxaa lagu go’aaminayaa sida ay wax u dhacayaan xagga wax kala iibsiga. Tusaale ahaan marka lacagta lala kala wareegayo. Lacagta horuumariska ah. Sida caadiga ah wuxuu qofku cadi ahaan heystaa toddobo ilaa toban maalmood in uu ku dhiibo lacagta gacanta ah oo sida caadiga ah gaareysa 10 boqolkiiba beeca wax lagu kala iibsaday. Lacagta inta soo hartay waxaa la bixinayaa maalinta guriga sii buuxda loola wareegayo.
Heshiiska waxaa sidoo kale lagu kala caddeynayaa waxa iibsiga ku jiraya marka laga reebo waxa caadi ahaan caadi loo arko. Fadlan akhri fasalka Maxaa guriga ka mid ah? ama weydii dallaalkaaga haddii aad dareemeysid in aadan waxa hubin.
Heshiis wax kala iibsasho waxaa sidoo kale lagu qoraa shuruudaha laga yaabo ee wax iibsiga. Waxay tusaale ahaan ku saabsanaan karaan shuruudaha ku aaddan deynka guriga ama koontaroolidda. Marka laga hadlayo guryaha lahaanshada qeyb ahaaneed waxaa markaas mar walba jira shardi ku aaddan in iibsadaha uu ururku oggolaado iyo in uu isla ururka xubin ka noqdo. Marka heshiis la qorayo wuxuu dallaalku sidaas darteed dukumiinti-gareynayaa aqoonsiga iibsadaha, taasoo ay qofka khasab ku tahay in uu sameeyo sida sharciga waafaqsan.
Mararka qaarkood waxaa in heshiis la saxiixo loo arki karaa cadaadis badan. Hal talo waa in dallaalka lala hadlo haddii aad qabtid dhawr su’aalood heshiis qoridda ka hor. Haddii aad weli in aadan wax hubin dareemeysid waxaa caqli wanaagsan ahaan karta in aad saaxiib ka codsatid in uu ku raaco ama in aad turjumaan adeegsatid gaar ahaan marka heshiiska la qorayo.
Waqtiga u dhexeeya heshiiska iyo guri u wareegidda.
Waqtiga u dhexeeya heshiiska iyo guri la wareegiddu waa waqti fiican si leysu diyaariyo – iibiyuhu si uu guriga uga baxo, iibsaduhuna si uu gurigiisa cusub ugu soo wareego.
Nadiifinta la xiriirta guuriddu waa wax labada dhinacba saameynaya, waana wax si cad oo aan daah saarneyn loogu nidaamiyay heshiiska. Nadiifin la xiriirta guuritaan waa wax aad u ballaaran, waana adagtahay in kaligaa la sameeyo. Iibiye ahaan waxaa sidaas darteed habboon in aad ogaatid sida ay nadiifinta la xiriirta guuritaanku ay u ballaarantahay, oo dabadeedna aad go’aan ka gaartid haddii aad adeegsaneysid shirkad nadaafadeed iyo haddii kale.
Haddii ay inta u dhexeysa iibinta iyo maalinta guri u soo wareegidda guriga wax ka jabaan iyadoo duugoobid caadi ah iyo duqoobid ay sabab u yihiin waxaa la isla oggolyahay in iibsaduhu uu kharashka dusha u rito. Laakiinse haddii ay walax jabaan ama si cad ay u xumaadaan taasoo ka dhalata taxaddir la’aan xagga iibiyaha ka timid, ama shil iska dhacay, iibiyaha ayaa caadi ahaan mas’uul ka ah in uu sidii ay ahayd waxa ka dhigo ama uu beddelo wixii jabay.
Maalinta guri u soo wareegidda
Maalinta guri la wareegiddu waa maalinta aad bixineysid lacagta inteeda kale oo aad furayaasha gurigaaga cusub qaadaneysid. Waa imminka marka aad si buuxda mas’uuliyadda gurigaaga cusub u leedahay. Iyadoon la eegeynin in aad dhab ahaan u soo guurtay maalintaas ama aad gadaal ka sameyn doontid. Laga billaabo maalinta la wareegidda guriga waxaa habboon in guriga ceymis la gashado.
Maalinta guri la wareegidda waxaa xafiiska dallaalka ama iibsadaha bangigiisa ku kulmaya iibsadaha iyo iibiyaha. Inta kulanku uu socdo wuxuu dallaalku soo bandhigayaa dukumiintiyada ugu dambeeya ee iibiyaha iyo iibsadaha. Dallaalku wuxuu xitaa heshiis kula jiraa iibsadaha iyo iibiyaha bankigooda si ay wax walba si sax ah ugu socdaan. Ugu dambeynta wuxuu dallaalku gudbinayaa qoraallo uu sameeyay oo tilmaamaya waqtiyada kala duduwan ee uu dallaalku wax qabtay inti ay hawshu socotay. Dukumiinti-gareynta waxaa sidoo kale ka mid ah qoraalladii beec dul dhigidda oo ka hadlaya cidda ka qeyb qaadatay baayactamidda laga yaabo in ay dhacday.
Maxaa guriga ka mid ah
Waxyaabaha dheeraadka ah ee guriga ka mid ah oo sidaas darteed iibsiga soo gelaya waxaa Swiidhan lagu nidaamiyay sharci. Waxyaabaha dheeraadka ah ee caadi ahaan guriga looga tegayo waxaa tusaale u ah armaajooyinka, mashiinka cuntada lagu karsado, qaboojiyaha, firinjeerka, makiinadda dharka lagu dhaqdo iyo tan dharka qallajiso. Macluumaad hoose fadlan weydii dallaalkaaga. Iibiyuhu shuruucdaas wuu ka leexan karyaa. Markaas waxaa muhiim ah in hannaan socodka horraantiisa ay taasi soo baxdo, siiba tusitaanka ka hor. Waxa wax laga reebi karo waxaa hor iyo horraan lagu nidaaminayaa heshiiska iibiyaha iyo iibsaduhu ay kala gaarayaan.
Haddii sidaas oo ay tahay ay wax khaldamaan
Xitaa kala iibsiga guriga ee ugu fiican waxaa imaan kara waxyaabo leys weydiinayo inta wax socdaan. Haddii ay tusaale ahaan soo baxaan wax adigu ka-iibsade ahaan aadan sugeynin waxaad toos ula xiriireysaa iibiyaha. Xaaladaha nuucaas ah dallaalku wuu hagi karaa, macluumaadna wuu siin karaa oo keliya dhinacyada laakiin waxba uma qaban karyo haddey noqon lahayd iibiyaha ama iibsadaha. Fadlan dallaalkaaga weydii waxa ay xeerarka shaqeynaya yihiin iyo sida aad wax yeeli kartid si aad u xallisid dhibaatooyinka laga yaabo in ay jiraan.
Haddiise aad u aragtay in dallaalku uu wax khalad ah sameeyay waxaad markaas toos ula xiriiri kartaa isaga/iyada. Haddii aadan weli raalli ahayn xiriirka ugu horreeya ka bacdi waxaad markaas dallaalka u gudbin kartaa ashtako qoraal ah. Hannaan socodka dukumiinti-garey adiga oo tusaale ahaan ashtakada ku gudbinaya hab warqad ah ama e-mail. Haddii sidaas oo ay tahay aadan heshiinnina waxaad macaamiil ahaan codsan kartaa in arrinkaaga uu eego Guddiga ashtakooyinka ee Suuqa guryaha.
Guryo cusub - hagida iibsiga guryaha la badh-iibsado
Sidan ayay u dhacdaa in la iibsado guryaha la-badh iiibsado ee dhawaan la dhisay. Halkan waxaad kala socon kartaa talaabooyinka kala duwan – laga bilaabo inaad samaysay wargelinta inaad xiisaynayso guri ilaa marka uu diyaar noqonayo in loo soo guuro.
Qabanqaabo micnaheedu waa in mashruucan guryahay ay ku jirto marxalada u diyaar garowga iibsinta soo socota iyo dhisme. Samee wargelinta inaad xiisaynayso mashruucan isla iminkaba si aad u hesho warbixin dheeraad ah oo ku saabsan qorshayaasha mashruucan.
Waxaad heli kartaa warbixin haddii aad u baahantahay inaad samayso wax dheeraad si aad diyaar ahaato wakhtiga iibintu dhacayso maadaama ay tusaale ahaan dhisayaasha guryaha qaarkood shuruud ka dhigaan in aad adigu ka diiwaan gashantahay xagooda inaad tahay qof doonaya inuu iibsado maadaama ay tani xukunto booskaaga safka xilliga la qaybinayo guryahan.
Marka ka shaqaynta diiwaanka dadka xiisaynayaa ay dhamaato markaasi waxaa guryaha soo haray lagu casuumaa dadka iyadoo lagu soo daabaco bogga internetka. Mashruucyada dhismaha ee cusub badanaaba waxaa lagu soo bandhigaa dhismayaasha bandhiga, dhinaca xafiiska dillaaliinta .
La xiriir dillaalka mas'uulka ka ah si aad u hesho warbixinta ku saabsan sida iibinta mashruucani u socoto.
Saxeex heshiiska ballansashada/heshiiska hor dhaca ah
Haddii lagugu casuumay guri aad markaasi aqbashay markaasi waa xilligii la saxeexi lahaa heshiiska ballansashada amaba heshiiska hor dhaca ah. Marxaladan marka la marayo waxaanu kugula talinaynaa inaad soo eegtay dhaqaalahaaga oo aad ballan qaad amaah ka soo samaysatay bangigaaga.
Miyaad doonaysaa inaad hesho la xiriirka bangi, weydii dillaalka mas'uulka ka ah mashruucan.
Heshiiska ballansashada waa nooc ah wargelinta xiisaha oo waxaa lala saxeexdaa dhisaha guriga. Tani waxay badanaaba dhacdaa xilli hore oo ka mid ah mashruucan maadaama la xiisaynayo in la baaro xiisaha suuqan. Heshiiska ballansashada maaha mid sharciyan xiran oo micnaheedu marka la soo koobo waa in mulkiilaha dhismuhu uu kuu kaydinayo mid ka mid ah guryaha oo la bixinayo kharashka ballansashada. Kharashkani wuxuu qayb ka yahay lacagta guud oo waxaa laga jaraa marka lacag bixinta ugu dambeysaa dhacayso.
Marxaladan marka la marayo, adigaaga iibsadaha ahi waad ka bixi kartaa iibsigan oo waxaad dib u helaysaa kharashki ballansashada marka laga reebo lacag u dhiganta mulkiilaha kharashkooda maamulka .
heshiiska hor dhaca ah
Heshiiska hor dhaca ahi waa heshiis aan laga bixi karin oo u dhaxeeya adiga iyo ururka cusub ee guryaha la badh-iibsado kaas oo aad ku xirmayso inaad iibsato gurigan. Marxaladan marka la marayo waxaa jirta xisaabin dhaqaale oo la soo qaatay taas oo soo bandhigta kharashyada la xisaabiyay ee ururkan lahaanshahooda dhismahan iyo kharashyada socodsiinta iyo raasamaalka. Kharashyadan waa xisaabin hor dhac ah oo xaaladuhu way is baddeli karaan markay noqoto tusaale ahaan lacagta aad guriga ku iibsanayso tusaale ahaan qiimaha iibsashada, kharashka bil walba la bixinayo iyo xilliga u soo guurida. Laakiin waxaa jira nidaam sharci kaas oo iibsadaha ka ilaaliya isbaddelo aan macquul ahayn kuwaas oo xaaladaha qaarkood iibsadaha siiya xaqa in laga baxo iibsigan.
Maadaama heshiiska hor dhaca uu yahay mid sharciyan lagu xirmayo markaasi iibsaduhu ma ka bixi karo iibsigan markay noqoto xaalado aan ahayn kuwa isbaddelada aan macquulka ahayn. Tani waxaa loo arkayaa dembi heshiis kaas oo keeni kara dalbashada mag-dhabid. Haddii ururkani oggolaansho ka haysto Hey'adda diiwaan-gelinta shirkadaha inay qaataan qadimaad waxay xaq u leeyihiin inay dhigaan heshiis ah in aad ururkan u dhiibto qadimaad xilliga saxeexida heshiiska. Qadimaadu intay leegtahay way kala duwanaan kartaa. Haddii adigu aad marxalad hore dhiibtay kharashka ballansashada xisaabta ayay ku jirtaa lacagtani.
Xilliga saxeexida heshiiska hor dhaca ah waxaa kale oo ururka guryuhu sameeyaa eegida xubinimadaada, laakiinse adiga si rasmi ah ma laguu qaadanayo xubin ahaata ururkan ka hor intaan oggolaansho dhicin.
Doorashada qurxinta gudaha
Mashruucyada guryaha qaar badan oo ka mid ah, laakiin maaha kuligood, waxaa dadka lagu casuumaa fursada in qayb laga qaato oo raad lagu yeesho qurxinta gudaha ee gurigan cusub. Fursadaha doorashada iyo farqiga u dhaxeeya kharashyada wuu kala duwanyahay mashruuc ilaa mashruuc. La xiriir dillaalka mas'uulka ka ah si loo helo warbixin ku saabsan sida uu yahay xaalka mashruucan.
Marka ururka guryuhu sameeyay qorshe dhaqaale ee uu oggolaansho ka helo Hey'adda diiwaan-gelinta shirkadaha in la oggolaado guryaha la badh-iibsado ayaad heshiiska oggolaanshaha la saxeexaysaa ururka guryaha. Caadi ahaan tani waxay dhacdaa dhowr bilood ka hor maalinta loo soo guurayo. Xaaladaha badankooda waxaad bixinaysaa lacag horu-marin ah taas oo caddadkeedu kala duwanaan karo, mararka qaarkood qadimaadi hore loo bixiyay ayaa tani loo xisaabin karaa. Waa xilliga heshiiska oggolaanshaha marka aad adigu sharciyan aad noqonayso mulkiilaha gurigan.
Macluumaadka ku jira qorshahaaga dhaqaale iminka waa kuwo cayiman oo kharashyadi lagu xisaabiyay heshiiski hor dhaca ayaa iminka dhaqan galaya. Iibsaduhu ma ka bixi karo iibsigan xilliga marxaladan oo waxaa taas loo arkayaa dembi heshiis taas oo keeni kara magdhabid lagaa dalbado.
Ka hor intaan ururkani saxeexin heshiiska oggolaanshaha waxay eegaan in lagu ansixin karo inaad xubin ka noqoto ururkan. Haddii aad horey u saxeexday heshiiska hordhaxa markaasi eegida xubinnimadu waxay dhacday xilligaas laakiin waa ugu horeyn iminka marka si rasbi ah laguu qaadanayo xubin ahaan.
Xilliga aad iibinayso guriga aad haysato
Miyaad ku talo jirtaa inaad iibiso guriga aad iminka haysato, markaasi waa xilligi tan la isu diyaarin lahaa. Waxaanu kaa caawinaynaa in la sameeyo qorshaha iibinta si ay ugu haboonaato u guurida guriga cusub.
Gurigaagi cusbaa ayaa diyaar sii noqonaya
Xilliga gurigaaga cusub diyaar sii noqonayo waxaad adigu si joogto ah u helaysaa warbixinta ku sabsan sida shaqadani u socoto, mashruucyada qaarkoodna waxaa xitaa lagugu casuumayaa inaad booqato goobta laga dhisayo taas oo ah wakhtiyo gaar ah oo cayiman.
Kantaroolid xaalada guriga
Intaanad hanti ahaan u helin gurigaaga cusub waxaa kantaroolida ugu dambeysa ee xaalada guriga sameeya qof madax banaan oo qaabilsan kantaroolida kaas oo qiimeeya in dhisidan loo fuliyay si waafaqsan nidaamka. Dhinacyadani waa dhisaha guriga iyo ururka guryaha.
Marar badan qaarkood waxaa adigaaga ah iibsadaha guriga aad fursad u helaysaa inaad goob joog ahaato oo markaasi waxaad kantarooli kartaa in wixi dheeraad ah ee aad dalbatay noqdeen sidii la doonayay maadaama aanay tani ku jirin kantaroolida kama dambeysta ah.
Ugu dambeynti diyaar u ah inaad la wareegtid
Haddii maalinta aad la wareegayso aan si cayiman horey loogu sheegin heshiiskii oggolaanshaha markaasi waxaa khasab ah in la sheego ugu dambeyn saddex bilood ka hor maalinta lala wareegayo. Lacag bixinta ugu dambeysaa badanaaba waxay dhacdaa dhowr maalmood ka hor maalinta lala wareegayo laakiin waa inay dhacdo ugu dambeyn maalinta la wareegida. Maalinta la wareegida waxaad adigu helaysaa furayaasha gurigaaga cusub.
Maadaama marar badan ay dhacdo in dhowr qof ay isku mar la wareegayaan gurigooda cusub waxaa ay noqon kartaa in adigu aad hesho wakhti hore loo sii go'aamiyay inaad ka faa'iideysatid wiishka guriga si guuritaankaagu ugu dhaco qaabka ugu sahlan ee suurtagal ah.
Ku raaxayso gurigaaga cusub
In la iibsado guri cusub caadi ahaan waa nidaam dheer marka la barbardhigo guri hore u dhisnaa. Laakiin markaad fursad u hesho inaad dareento dareenka ah inaad tahay qofki ugu horeeyay ee halkan ku noolaada waxaad dareemi doontaa inay u qalantay in la sugo.
Lix talooyin oo degdeg ah oo ku aaddan wadda – guriga
• Suuqa guryaha iyo heerarkiisa qiimaha ka hel sawir wanaagsan – Wax ka hel tirakoobka iyo xayeesiinta guryaha ee tusaale ahaan Hemnet.se, Maklarstatistik.se ama xafiisyada dallaalka bogaggooda intarneetka.
• Hubi in aad heshid ballan qaad qoraal ah – Xagga maalgelinta guriga iyo xeerarka Swiidhan ka shaqeynaya kala hadal bangiyo kala duduwan.
• Tag tusitaanno guryo oo fara badan – Booqo aagag deegaan oo kala duduwan, tagna tusitaanno fara badan si aad fikir uga heshid halka aad dooneysid in aad degtid iyo tilmaamaha aad dooneysid in uu gurigaaga mustaqbalku lahaado.
• Xasuusnaw in beec dul dhigid aysan qofka xireynin iyo in aysan waxba dhammaannin inta iibsadaha iyo iibiyaha labaduba aysan heshiiska saxiixin.
• Su’aalo fara badan dallaalka weydii, kana faa’iideyso aqoontiisa – Dallaalka Swiidhan waxaa isticmaala iibiyaha laakiin wuu dhawrayaa xitaa iibsadaha danihiisa.
•Ha illoobin in aad baaritaan ku sameysid deegaanka – Swiidhan waxaa iibsadaha dul saaran waajib aad u weyn oo ah in uu wax iska baaro. Si sugan u baar guriga aad dooneysid in aad iibsatid, adeegsana haddii loo baahdo qof wax koontaroola. Haddii aad qorsheyneysid in aad iibsatid guri lahaansho qeyb ahaaneed ah waxaa xitaa muhiim ah in aad baartid dhaqaalaha ururka.